Umthetho: ukuthunyelwa nge-sexting kuthumela imifanekiso enesithunzi Umvuzo weZiseko
Ikhaya Umthetho Ukuthunyelwa kwemiyalezo
Abantu abaselula bathambekele ekusebenziseni igama elithi 'ukuthunyelwa kweetekisi', kusetyenziswe ngakumbi ngabafundi okanye intatheli. Kuthetha ukuthumela imiyalezo yesini okanye iifoto zabo ngokwabo ngekhompyutha. Incazelo yatshintshile njengoko iteknoloji isuke kwiifowuni eziphathekayo ngaphandle kweekhamera ezivumela kuphela imilayezo yombhalo okanye iifowuni ukuba ixhase ukusetyenziswa kwezixhobo ze-smartphones ezingabamba iintlobo ezahlukeneyo zeevendiyo zentlalo ekufuneka zithumele imilayezo, iifoto nakwividiyo.
Ingxelo evela kuSeptemba 2015 eyabelwe ngu-NASCO, i-European NGO Alliance for Child Safety Online ebizwa ngokuthi 'Amalungelo eSondo kunye neengozi zesondo phakathi koLutsha kwi-Intanethi"Kubandakanya ukuhlaziywa kophando olutshanje malunga nokuthunyelwa kwe-imeyile. Isishwankathelo sibonisa oku kulandelayo:
1. Amantombazana abhekana noxinzelelo olungakumbi ukuthumela 'izabelo zesondo' kunye nezigwebo ezinzima xa ezo mifanekiso zikwabelwana ngaphandle kommkeli ofunyenweyo.
2. Olunye uphando lubonisa ipesenti ezincinci zabantu abatsha ababelana ngemilayezo yesini, ngelixa abanye babika ipesenti eziphezulu, kwaye ezininzi izifundo zisebenzise iinkcazelo ezahlukeneyo; Ngokubanzi akucaci ukuba uninzi ulutsha lukwabelana ngemifanekiso yesondo.
3. Ulutsha oludala kunye nalabo abanomngcipheko okanye iimpawu zokufuna ukuvakalelwa, banokukwazi ukuthumela i-'xtxt ', kodwa ulwazi oluninzi malunga noluntu kunye nezinye iimpawu zolutsha ezisetyenziselwa ukuthumela imiyalezo.
Kufuneka ukwazi okungakumbi
4. Kukho ukungqinelana kwincwadi phakathi kwamalungelo olutsha kwintetho yesini kunye nobumfihlo kunye nokukhuselwa kwabantwana. Akucacanga ukuba abantu abatsha bacinga njani ngemvume, oko bafundiswayo, kunye nokuqonda kwabo kwemvume malunga nokuthunyelwa kwemiyalezo ye-imeyile kunye nokwabelana ngemifanekiso
Esi sikhokelo esiqhelekileyo kumthetho kwaye asiyilungiselelo lomthetho.
<< Yintoni iMvume yokuSebenza? Ukuthumela imiyalezo ngefowuni phantsi komthetho weScotland >>